Excalibur एक 5-reel, 3-row, र 20-निश्चित शर्त लाइन भिडियो स्लॉट हो। खेलले नि: शुल्क स्पिन, स्क्याटर जीत र जंगली प्रतिस्थापन दुवैलाई नियमित रूपमा जंगली प्रतीकहरू र एक सुविधा दिन्छ सुनको जंगली प्रतीक।
यो क्लासिक गेमले तपाईंलाई मध्ययुगीन समयमा लिन सक्छ र कथाको बारेमा बताउँछ राजा आर्थरको जादुई तलवार, एक्कालिबुर। खेल उत्साह संग पैक गरिएको छ। गोल्डन वाइल्ड प्रतीक (जादुई एक्कालिबुर) लाई मार्नुहोस् र तपाईंको विन्निहरू चार द्वारा गुणा गर्नुहोस्! उठो, सर स्पिन-एक धेरै, र तपाईंको जंगली, जंगली भाग्य पत्ता लगाउनुहोस्!
Excalibur अपडेट गरिएको: जनवरी 29, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.2 जंगली ब्यवहार
2.0.0.3 बैंक टाँस्नुहोस्
2.0.0.4 जिन्जरब्रेड लेन
2.0.0.5 निरपेक्ष सुपर रिल्स
2.0.0.6 भिडियो रूले
2.0.0.8 सेतो राजा